एमाले र काङ्ग्रेसबीच ३० हजारको मतान्तर : चुरे भावरले ल्यायो मात्रै २ मत | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-07-18T13:02:49.706259+05:45
एमाले र काङ्ग्रेसबीच ३० हजारको मतान्तर : चुरे भावरले ल्यायो मात्रै २ मत
personशम्भु दंगाल access_timeसाउन २, २०७४ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ, दोस्रो चरणको स्थानीय तहको मतगणना परिणाम हेर्दा एमाले र काङ्ग्रेस बीच ३० हजारको मतान्तर देखिएको छ । प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३ सय २९ स्थानीय तहमा राजनीतिक दलले पाएको मत सङ्ख्या हेर्दा एमाले र काङ्ग्रेस सँगसँगै देखिएका छन् ।
एमालले स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्षमा १४ लाख ८९ हजार ७ सय ८९ मत पाएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले १४ लाख ५९ हजार ९ सय ६६ मत पाएको छ ।
यस्तै माओवादी केन्द्रले ७ लाख २ हजार ३ सय १५ मत पाएको छ भने राप्रपाले १ लाख ५३ हजार ५ सय ६९ मत ल्याएको छ । पाँचौँ स्थानमा रहेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले १ लाख ३९ हजार ९ सय ५७ मत प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले १ लाख २३ हजार १ सय १ मत प्राप्त गरेको छ ।
दोस्रो चरणको चुनावमा सहभागी ३३ दलमध्ये ६ दलले १ लाख मत कटाएका छन् भने ६ दलले हजार सङ्ख्याभित्रको परिणाम ल्याएका छन् । २१ दलले हजारको सङ्ख्यामा पनि भोट तान्न सकेनन् । उनीहरूले ९ सयभन्दा मुनिको भोट सङ्ख्यामा खुम्चिएका छन् । तल प्रस्तुत दलहरूले विभिन्न पदमा पाप्त मत आँकडामा खुल्ला सदस्य पदको आँकडा भने समावेश गरिएको छैन ।
२१ साना दलले हजार मत पनि पुर्याएनन्
साना दल केवल नाम मात्रका र दलको सङ्ख्या सूची बढाउनका लागि उपयुक्त देखिएका छन् । उनीहरूको जनआधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएका ३ सय ३४ स्थानीय तहमध्ये ३ सय २९ तहमा पाएको कूल मत जोड्दासमेत २१ साना दललका उम्मेदवारले १ हजार मत पुर्याउन सकेका छैनन् । काठमाडौँ महानगरमा तेस्रो स्थान ल्याएको अन्य स्थानमा समेत राम्रो मत ल्याउने दाबी गरेको विवेकशील नेपाली दललाई जनताले पत्याएनन् । यो दलले प्रमुख पदमा २५ मत र वडा अध्यक्ष पदमा ६५ मत ल्याएको छ ।
यस्तै ४ साना दलले हजारमा अर्थात ४ अङ्कको मतपरिणाम हासिल गरेका छन् । यस्तै १ लाखभन्दा माथि मत ल्याउने ६ दल मात्र छन् ।
यस्तो छ दोस्रो चरणको चुनावमा दलले पाएको कुल मतसङ्ख्या
८. नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
चन्द्रागिरी पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले लेखे ८ मिनेटमा यस्तो कविता
बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले भन्यो, ‘भोली अबेर सम्म बैंक खुला राख्नु’
डा. केसीको यही माग पूरा नहुँदा देश हल्लियो, यस्तो थियो माथेमा प्रतिवेदन (प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ)
राजदूत सिफारिसमा उठ्यो प्रश्न, विपक्षी काँग्रेसले भन्यो-संविधान विपरित
प्रविधिमा पहुँच बढाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्छः अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौंमा सार्क हस्तकला केन्द्र निर्माणको तयारी
सेवाप्रदायक कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारी अन्योलमा
गुफाबाट उद्धार गरिएका थाई बालक आज घर फर्किदै, अस्पतालमा भव्य विदाई समारोह
डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव किन मौन ?
मृत्यु भएको १० दिनपछि महिलाले जन्माइन् बच्चा